Sirta guulihii ku gadaanaa abaartii daba-dheer 1974 iyo sir akhriska ku dedan abaartan 2017 !! ( dhib dhacdaba dhayma dabayaal ) Dr.khadar-Libaaxley.
Sunday, 02 April 2017 11:31
Duruufaha midabeynaya ayey dabcigooda tahey hadba in uu saxal iyo saban gaar ahi sida kaaha waabari u soo mudho; hadba markuu midi mudo laasimo ( badhaadhe ,farxad iyo dhoolo ka qosol ama gaajo, goblan , caydhnimo, darxumo iyo daranyo ay jiqlaha buuxiyaan); sunaha nolosha ayey dabcigeeda tahey in waayaha sameed iyo waayaha xumeed ay sida miisaanka isku dheeli tiraan oo doorba midi tamar-galo fariinta iyo dhambaalka uu xambaarsanyaheyna noqdo ( cashar iyo duruus ay dhadhamiyaan noolaha qaybtaasi nasiibka u helay).
1974 waxa ay noqotay dhamaadka abaartii lafta iyo jiidhkaba dhameysay, dadkii xiligaa caydhaysay oo lagu daadgureeyey diyaaradaha ilaa koonfur ,abaartaasi oo bar-dhaceedu ahaa ( saxil bari, togdheer illaa sanaag ) ayaa loogu magac daray daba-dheer ; halkan ka tiri siraha dahsoon ee ku duruuf gadaanaa abaartii daba-dheer:
inaga oo ka duuleyna aayada quraanka ah ee ( ina macal cusri yusraa, fa ina macal cusri yusraa) waxa dhacay sida tan.
1) 1974 waxa soo dhamaadey daba-dheer.
2) abaartii sanadkaa 3 saddex sano abaartaasi ka dib waxa dhacay dagaalkii somalida iyo xabashida 1977 oo guushii abid ugu weynayd raacday somalida; oo ay gaadheen illaa duleedka caasimada itoobiya; in ay dagaalkaa somalidu guul ka gaadhay waxa daliil u ah; dawlada itoobiya barigaasi ayaa ugu dambeysay in dhul ay soomaali leedahey toos iyo badheedhe u soo weerarto, dagaal qabow oo dadban mooyee.
3) abaartii sanadkaa 7 sanno kadib waxa abuurmay dhaqdhaqaaqa halgankii dib u xoreynta somaliland.
4.) abaartii sanadkaa 17 sanno kadib waxa dib loo xoreeyey oo waliba loo aasaasay jamhuuriyada somaliland xilli uu waliba jiilaal sii dhamaanayey si lamid ah sidii ay u dhamaatay abaartii daba-dheer; dhacdooyinkani ma’aha kuwo fudud waa taariikh dhaxal gal noqday oo kuwada gadaaman duruufo qalafsanaa oo dhabar adeyg iyo kal adkaan lagu soo jiidhay.
2017 waxa ay u eegtahey in ay soo af jarmayso abaartii salfatay arwaaxaha dad iyo duunyo tiradoodu aad u badantahey , caydhaysay badi xoolo raacatadii dalka gees ka gees, rajo beel ku riday riyooyin wacnaa oo u dhisnaa badi dadkii ay tooska u haleeshay abaartan u dambeysay (taasi oo ku dhacday deegaankii ay horey abaartii daba-dheer ugu dhacday ) hayeeshee dabciga nolosha ayey caadadeeda tahey ( in marka uu illaahey daaqad xidho ay furanto daaqad kale amaba albaab ka fiican ); waxa daliil u ah:-
isla sidaaday abaartan u dambeysay laydhka cas inoogu shiday ee qayladhaanta, diifta iyo badhtigu isqoorsaday xoolihiina lagu dhawaaqay in la xidhay dhoofkiisii ; ee ay rajo xumo ruuxdeedii istaadhantay ( ayaa dhanka kale kaabiga iyo kambalka soo saarmay soobixida maalgashiyo waaweyn oo taariikhiya oo dekado iyo saldhigyo intaba leh oo ay ku baxayaan maal aduunyo farabadani dulucda u jeedadeeduna tahey curashada isbadel iyo koboc dhaqaale oo hor leh kuna soo jihaysan dalka , dadkaba iyo wadamada dariska intaba ).
Intaasi marka ay rasmi u tamar-gasho ruuguna inoo adkaado waxa xigayaa waa helitaanka aqoonsi caalamiya iyo dunida oo albaabadeeda inoo balaqda insha’allah.
Guulaha weynu tirsaneynaa inaga oo ku cabir qaadaneyna tirooyinka dhiman tan iyo inta markale laga gaadhayo abaartan ina soo martay mid la mid ah;
Waxaan dareemayaa maalin aanan garaneyn xiliga ay tahey balse dalkan iyo dadkaniba barwaaqo sooran ay ku naaloonayaan gees ka gees.
Ku tiirsanaanta xoolaha habkii hore ee dabeeciga ahaa , waa hab duugoobey oo aan la jaanqaadi karin dunidan casriga ah, waxa baahi weyn looqabaa qorshayaal casri ah oo cilmi ku dhisan si looga midho dhaliyo dhaqashada xoolaha taasina waxa ay ku xidhantahey ahmiyada dadweynaha reer somaliland siiyaan dhaqashada xoolaha.
More in this category: « DHAGEYSO : Maanso : Khali Duur By Bashir Goth Jawaab Ku Socota Khadar Aar Oo 1/03/2017 qoray Maqaal Cunwaankiisu Yahay:Masjidka Qiblatayn Saylac Kuma Yaal Ee Waa Madiina, Taariikhda Ha La Saxo »